बन्द आँखाभित्रको बृहत् दृष्टि
दिनेश गौतम काठमाडौं, १० जेठ
२४ वर्षअघि रामेछाप फुलासीका युवराज लामालाई लाग्थ्यो- यो संसारमा जति पनि मान्छे छन्, सबै म जस्तै छन् । मैले जे जति देखेको छु, अरुले पनि त्यति नै देखेका छन् । मैले हेर्ने संसार र अरुले हेर्ने संसार एउटै हो । मेरो दृष्टि र अरुको दृष्टि पनि एउटै हो ।
जब स्कुल जान पाएनन्, तब उनले बुझे आफ्नो र अरुको दृष्टिमा फरक रहेछ ।
जन्मिँदा उनी सामान्य जन्मिए । ३ दिदी र २ दाजुपछि कान्छो सन्तानका रुपमा उनले यस धर्तीमा पाइला टेके । उनी २ वर्षका भए । उनको शरीरका अंगहरु चलमलाउन थाले । २ वर्षपछि उनको आँखाले बाङ्गो हेर्न थाल्यो । राखिदिएको खाना नदेख्ने भए । त्यसपछि उनको परिवारले थाहा पायो, उनी दृष्टिविहीन रहेछन् ।
‘मेरो अगाडि खाना राख्दा देखिनँ रे ! आँखाले बाङ्गो हेर्न थालेछ । त्यसपछि म दृष्टिविहीन भएको थाहा भयो’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि उपचार गर्न परिवारले काठमाडौं ल्याएको रहेछ तर ढिला भएकाले उपचार हुन सकेन ।’
गाउँमा विवाह, पूजा हुन्थे । चाडपर्वमा सबै मामाघरमा जान्थे तर उनलाई लगिँदैनथ्यो तब उनी आफैँले आफूलाई प्रश्न गर्थे- मलाई किन लगिँदैन ? मेरो के कमजोरी छ ?
पटक पटक काठमाडौं ल्याउँदा पनि उनको उपचार सम्भव भएन । त्यसपछि उनको जीवनमा कालो बादल मडारिन थाल्यो । उनलाई लाग्थ्यो- अब मेरो संसार अँध्यारोमा नै बित्छ ।
सँगै खेल्ने साथी स्कुल जान्थे तर उनी जान पाउँदैनथे । स्कुल जान नपाउँदा उनी निराश बन्थे ।
‘साथीहरु सँगै खेल्थे तर स्कुल जान दिँदैनथे । म पाइपमा अल्झिएर लड्थेँ । मलाई बोकेर स्कुल लैजाने पनि कोही थिएनन् । जब स्कुल जान पाइनँ अनि म आँखा नदेख्ने रहेछु भन्ने थाहा पाएँ’, उनी भन्छन् ।
दृष्टिविहीन भएको कुराले उनलाई कहिल्यै दुःख लागेन तर समाज, छरछिमेकले दृष्टिविहीन भएपछि अरुको भर पर्नुपर्छ भन्थे । केही गर्न सक्दैन, कुन जुनीको पाप हो भनेर बाआमालाई अनेकन नकारात्मक प्रश्न आउँथे । त्यो बेला उनको मन पोल्थ्यो ।
जब उनी ९ वर्षका पुगे, त्यसपछि फेरि उनको जीवनले अर्को मोड लियो । मामाको छोरा र दाजुको विदेशीसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । दाजुहरुको सहयोगमा उनलाई नेदरल्यान्ड्सबाट स्पोन्सर मिल्यो । त्यसपछि उनी पढ्नका लागि काठमाडौं आउने भए ।
उनी काठमाडौं पढ्न आउने भएपछि गाउँमा हल्ला चल्यो— ‘अब सरकारलाई जिम्मा लगाउने भए । बाआमाको समस्या हल हुने भयो । सरकारले नै पाल्छ रे ! आँखा नदेख्ने भएकाले छोरोलाई सँगै राखेनन् ।’
तर, उनको परिवारले उनको सुन्दर भविष्यका लागि काठमाडौं ल्याए । सानोमा काठमाडौं आएको उनलाई याद थिएन । काठमाडौं आउँदा उनले अनुभव गरेको क्षण यही नै पहिलो थियो ।
‘सानोमा काठमाडौं आएको मधुरो याद छ’, युवराज भन्छन्, ‘पढ्नका लागि काठमाडौं आउँदाको त्यो दिन अझै बिर्सेको छैन । केही आशा बोकेर आएको थिएँ । स्मृृतिमा अझै गाढा छ ।’
डाँडाकाँडा, उकालोओरालो गाउँको माटोमा लडिबुडी गर्दै चिसो सिरेटोमा हुर्किएका युवराजलाई काठमाडौंबारे केही थाहा थिएन । गाउँको बोलीचाली । गाउँकै सोच, व्यवहार र धारणा । केही समय काठमाडौंमा घुलमिल हुन गाह्रो पर्‍यो ।
‘काठमाडौं आएपछि स्कुल जान थालेको एक हप्तासम्म नुहाउने काम मात्र भयो’, युवराज भन्छन्, ‘गाउँमा हुर्किएको शरीर, कालो, फोहोर थियो । एक हप्तासम्म नुहाएपछि स्कुल जान सुरु भयो ।’
उनले पढ्न त सुरु गरे तर साथी थिएनन् । उनी आफ्नै गाउँका साथीभाइलाई सम्झन्थे । भाषाको समस्या थियो । त्यो बेला उनलाई जटिल भयो ।
भन्छन्, ‘त्यो समय मेरो मन कुण्ठाले भरिभराउ भएको थियो । भाषा नबुझ्ने मुख्य समस्या थियो तर मिहिनेत गर्न छाडिनँ ।’
गाउँमा सानो घरमा हुर्किएका युवराजलाई काठमाडौंको स्कुल विराट लाग्यो । स्कुल नै दरबार जस्तो । देशमा राजा हुन्छ रे भन्ने पनि यहीँ आएर थाहा पाएका थिए उनले ।
पढेर सबैलाई देखाउँछु भन्ने अठोट लिए युवराजले । ब्रेल लर्निङ, अंग्रेजी, गणित सिकेर कक्षा ३ मा पढ्न थाले । ५ कक्षासम्म त्यति राम्रो पढ्न सकेनन् । जब ६ कक्षामा पुगे, त्यसपछि उनी पढाइमा कहिल्यै कमजोर भएनन् ।
‘६ कक्षामा पुग्दा भाषा पनि राम्रो भयो । बोल्न सक्ने भएँ । मभित्रको डर पनि हट्यो । टप १० विद्यार्थीभित्र पर्न थालेँ’, उनी खुसी हुन्छन् ।
कहिलेकाहीँ उनलाई अरुका लागि आफू बोझ भएको महसुस हुन्थ्यो तर उनले छिट्टै आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा लिन्थे । सकारात्मक सोच्थे ।
‘बिदामा दशैँमा घर जान्थेँ । अहिले जस्तो गाडी थिएन । हिँडेर जानुपथ्र्यो । ठूलो भएको थिएँ, दाजुहरुले बोक्न नसक्ने । दाजुहरु २ घण्टामा घर पुग्दा मलाई ४ घण्टा लाग्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला आफू बोझ भएको महसुस हुन्थ्यो । मामाघर जान रहर लाग्थ्यो । जान नपाउने । त्यसैले कतै हराउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो ।’
१० कक्षासम्म पढ्दा उनी अब्बल भएका थिए । एसएलसीपछि झन् अवसर पाउँदै गए । एसएलसीपछि उनले सेतो छडीको प्रयोग गर्न थाले । सुरुमा त सेतो छडी बोकेर हिँड्न गाह्रो भयो उनलाई । विस्तारै सिक्दै गए । अहिले कुना, कन्दरा, हिमाल, पहाड जहाँ पनि पुग्न सक्छन्, त्यही सेतो छडीको सहायताले ।
‘सेतो छडीको साथमा कलेज कसरी जाने ? के गर्ने ? भन्ने अन्योल थियो’, उनी भन्छन्, ‘सिक्दै गएँ, अहिले जहाँ पनि सहजै पुग्न सक्छु ।’
सामाजिक कामप्रति उनी अगाडि सर्थे त्यसैले उनले सोसियल वर्कमै स्नातक गरेका छन् । सामाजिक कामसँगै आफैँ केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच लिएर हिँडेका छन् ।
उद्यमी बन्ने उनको सपना छ । उनले ‘हाइक टु रिजोइस इन नेचर्स’ अभियान पनि चलाइरहेका छन् । जीवनलाई उनले अवसरको रुपमा लिएका छन् ।
‘जीवन अवसर हो । उत्कृष्ट बनेर सफल मनुष्य बन्ने कि खत्तम र निकृष्ट बन्ने, राक्षस बन्ने कि, देवता बन्ने, कस्तो जीवन बनाउने हो, त्यो आफ्नै हातमा छ’, युवराज भन्छन् ।
‘बाहिरको वस्तु देखिँदैन तर त्यो वस्तु कस्तो होला भनेर सयौँ चित्र कोर्छु । पढेको कुरा कथ्य, तथ्य र सत्य हो । दृष्टिविहीनलाई तथ्य थाहा हुँदैन । कथ्यमै रमाउँछौँ’, युवराज भन्छन् ।
जब मनमा विचलन आउँछ, तब उनी योग प्राणायम गर्छन् । अध्यात्मको संसारमा हराउँछन् ।
‘दृष्टिविहीनहरुमा कहिलेकाहीँ विचलन पनि आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘एकाग्रता पनि हुन्छ । जब विचलन आउँछ, तब योग प्राणायम गर्ने, किताब पढ्ने, लेख्ने काम गर्छु ।’
दृष्टिविहीन भएकामा उनलाई कहिल्यै पश्चात्ताप लागेन । उनलाई जीवन रङ्गीन लाग्छ भन्छन् ।
‘म आँखै देख्दिनँ भनेर गुनासो गर्ने कि मसँग हात छ भनेर खुसी हुने ?’, उनी भन्छन्, ‘दृष्टिविहीन हुनुको फाइदा पनि छ । राम्रो श्रोता बन्न सक्छौँ, गाउन सक्छौँ । अवसर पाउने हो भने जे काम पनि गर्न सकिन्छ ।’
आज उनको परिचय बदलिएको छ । गाउँघरमा मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छ । पहिले साथीहरु टाढिन्थे उनीबाट । अहिले नजिकिन्छन् ।
‘यहाँसम्म आइपुग्दा क्रान्तिझैँ लाग्छ’, युवराज भन्छन्, ‘गाउँदेखि शहरसम्म आएर स्नातकसम्म पढ्दा आकाश—जमिनको फरक भएको पाउँछु । हिजो बाआमालाई छोरो सरकारलाई बुझाए भन्नेहरु मैले पढेको देखेर छक्क परेका छन् । गाउँमा धेरै पढ्नेभित्र मेरै नाम आउँछ ।’
अबको उनको योजना उद्यमी बन्नेछ ।
‘आफू उद्यमी भएर अरुलाई रोजगारी दिने हो’, उनी भन्छन् । बाआमाको इच्छा छ, सरकारी जागिर खाओस् भन्ने तर उनी उद्यमी बन्न चाहन्छन् सँगै समाजसेवा पनि ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, ०७:२३:००
विदेशबाट उद्धार गरिने नागरिकलाई निःशुक हवाई टिकटको माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट
लकडाउनका कारण रोकिएका २ सय २७ शब चार्टर्ड उडानमार्फत् ल्याइने